Muki beekamaan 'Maanyooliyaa' 'White House' tti argamu muramuufi. - BBC News Afaan Oromoo
Muki beekamaan 'Maanyooliyaa' 'White House' tti argamu muramuufi.
Goodayyaa suuraa The Jackson Magnolia yoo xiqqaate jaarraa lamaaf fuuldura 'White House' taa'eera
Muki seena qabeessa fuuldura 'White House' naannoo waggoota 200'f dhaabbachaa ture muramuuf sagantaan ba'eeraaf.
'The Jackson Magnolia' Pireezidaant Andriw Jaaksan, haadha warraasaanii du'an yaadachuuf ture kan dhaaban.
Sagantaawwan adda addaa achi jelatti raawwachuurra darbee nootii doolaara 20 irrattillee bara 1928-1988'tti maxxanffamee ture.
Garuu ogeessonni mukni kun miidhameera waan ta'eef nageenyaaf sodaachisaadha jedhaniiru.
Giiftii Melaaniyaa Tiraamp qaamni guddaan muka kanaa akka muramuuf waamicha dhiheessanii jiru
Aadde Tiraamp sanyiin mukichaa hambifamee iddoodhuma sanatti mukni haaraa akka dhaabbatuuf gaafachuu isaanii dubbi himtuun 'white house' Isteefaanii Gireeshaam ibsaniiru.
Murtoo kanarra kan ga'an mukichi nageenya namoota daawwannaaf dhufaniif gaazexessitoota yeroo hunda achi jela dhaabbatanii pireezidanticha eegan irratti sodaa waan uumeef akka ta'e Melaaniyaan dubbatanii jiru.
Mukni kun jalqaba kan dhufe muka Maanyooliyaa maasii jara lameenii Teeneesiitti argamurraa damee isaa muruun dhaabbate.
Rakkoon muka kanaa kan eegale jalqaba 1970 keessa yoo ta'u, gariin hidda isaa tortoree simiintoodhaan duuchamee ture. Gochaan kun yeroo sanatti furmaata filatamaa ta'us, mukichi akka hin dandamanneef miidheera kan jedhanis jiru.
Goodayyaa suuraa Heelikooptarri pireezidantii dhiheenya muka kanaarraa yeroo hunda kaati
Bara 1981'tti, simiintoon sun kaafamee utubaa guddaadhaan bakka buufamee ture.
Gabaasni CNN jecha Waajjira Bosonaa Biyyoolessaa Ameerikaa eeruun ba'e akka mullisutti, mukichi jalqabarratti haala gaariirra waan jiru fakkaata ture.
Haa ta'u malee garmalee miidhamee jiraachuufi guutummaatti gargaarsa utubaa namtolchee irratti akka hirkate hima.
Muki Maanyooliyaa bulchiinsa pireezidantoota 39, Waraanaa Walwaliinii fi Waraana Addunyaa lama dabarsee jira.
Mucaa pireezidantii duraanii Biil Killintan kan taate Cheelsii Kiliintan, warreen muka kana waggoota kana hunda kununsaa turan fi Aadde Tiraamp irra deebiin dhaabuuf karoorfachuu isaanii galateeffachuun Tiwiitar irratti tiwiit gooteetti.
Ogeeyyii Kooriyaa Kaabaa misaa'ela gabbisanirra qoqqobbiin kaa'ame